‘Kumapurisa handiende’ | Kwayedza
09 Aug, 2019 - 00:08	 2019-08-08T15:23:25+00:00 2019-08-09T00:00:14+00:00 0 Views
‘Imba yangu ingaparare’
‘Regai zvangu ndirohwe’
MUDZIMAI wemuHarare akashamisa vanhu vaive mudare apo akati murume wake anogara achimurova uye akambomurikita zvekusvika pakutyoka ruwoko asi haadi kumumhan’arira kumapurisa nekuti anoda kuchengetedza imba yake.
Moila Muwano akataura mashoko aya mudare reHarare Civil Court apo akamhan’arira Mufaro Zhou.
“Mambo wangu, baba ava vakatora runhare rwangu, kadhi rekubhengi nechitupa changu uye vakaburitsa nhumbi dzangu mumba. Asi paakadzosa zvinhu izvi, akangouya nekadhi rekubhengi neID chete, handina kuona runhare rwangu,” anodaro.
Anoti anogara achirohwa senyoka yapinda mumba naZhou.
“Baba ava vanongotsvaga nyaya pavadira, vanondirova chero nyaya dzekunyepa. Ndakatombotyoka ruwoko vandirova. Kumapurisa handidi kuenda nokuda kwokuchengetedza imba yangu kuti isaputsike uye vanonditi ukangondisungisa ndodzoka ndichikusungisawo,” anodaro Muwano.
Zhou anoti haana dambudziko nechikumbiro chaMuwano kudare.
“Handipokane nechikumbiro chavo, asi panyaya yenharembozha ndakazomuudza kuti ndakaitengesa kuti ndiwane kubhadhara mari yemwana yechikoro. Pari pakuvarova, ndakangozviita kamwe chete,” anodaro.
Mutongi Tafadzwa Miti akapa Muwano gwaro redziviriro.